भीम रावलमाथि अर्को बज्रपात, ओलीले यति सम्म भनेपछि हंगामा — Imandarmedia.com
भीम रावलमाथि अर्को बज्रपात, ओलीले यति सम्म भनेपछि हंगामा
काठमाडौ। केहि दिन अघि मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशको ईन्चार्ज पद गुमाएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावललाई अर्को झट्का लागेको छ ।एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भीम रावललाई एमालेमा ठाउँ नभएको बताएपछि झट्का लागेको हो । ओलीले रावललाई पदको बार्गेनिङ गर्नेहरुलाई एमालेमा ठाउँ नभएको भनपछि रावलको चित्त दुखाएका छन् ।
एमाले उपाध्यक्ष रावलले सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी खोसिए पार्टीमा नबस्ने घुर्की लगाएपछि ओलीले बार्गेनिङ गर्नेहरुलाई एमालेमा ठाउँ नभएको बताएका हुन् । १० बुँदे कार्यान्वयन नभए रावलले एमाले छोड्नेसम्मको तयारीका साथ आफू निकट नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको भनिएका बेला ओलीले रावलको नाम नलिइकनै पदका लागि पार्टी छोड्नेहरु एमाले हुनै नसक्ने बताए ।
भीम रावललाई इंकित गर्दै उनले भने, ‘एमालेका केही नेताले पद नपाए पार्टी छोड्छु भनेर बार्गेनिङ्ग गरेको देख्छु । त्यस्तो बार्गेनिङ मलाई स्वीकार्य हुँदैन ।’आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी लिने कुरा स्वभाविक भए पनि पदका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति एमालेको नेता हुन नसक्ने भन्दै उनले अब पार्टीमा त्यस्तो विचारले स्थान नपाउने चेतावनी पनि दिए ।
‘पद नपाए पार्टी छोड्ने रे । के भन्छ कार्यकर्ताले ? फलानो पद नदिने हो भने म पार्टीमा बस्दिन, छोड्छु रे के भन्या त्यो रुएमालेका लागि सुहाउने कुरा हो ?,’ ओलीले भने, ‘कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आदर्शले के भन्छ ? पदका लागि काम गर, पद नपाए पार्टी छोड भन्छ ?’ ओलीको प्रश्न छ । देश,जनता र आन्दोलनको रक्षाका लागि जिम्मेवारी आइपर्दा पदमा बस्नुपर्ने तर पद नपाए पार्टी छोड्छु भन्नु आन्दोलन विरोधी कुरा हुने उनको भनाइ छ ।
यसै गरि , नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई पनि एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको पक्षमा खम्बाझैं उभिएका छन् । उनले एमाले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज भीम रावल नै भएको बताएका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लेखराज भट्टलाई एमाले सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज तोकेपछि विवाद र आलोचना चलिरहेको बेला नेता भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् ।
एमालेमा त १० बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न नपर्ने, ओलीले जे भन्यो त्यहि निर्णय हुने नेताहरूका पुराना जिम्मेवारी पनि फिर्ता नहुने अचम्म छ नि ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा नेता भट्टराईले १० बुँदे सहमति लागु भैरहेको र हुने क्रममा भएको बताएका थिए ।
उनले पार्टीमा अब कुनै पनि बिमति नभएको समेत बताएका थिए । तेसो भए सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज को हो त ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा नेता भट्टराईले इन्चार्ज भीम रावल नै भएको बताए । ‘भीम रावल नै हो नि इन्चार्ज’ उनले भने ।
उनले उत्तर दिन नपाउँदै उनीमाथि प्रश्नकर्ताले अर्को प्रश्न तेर्साए ‘ओलीले त निवासमै लेखराज भट्टलाई बोलाएरै इन्चार्ज तोकेर पठाउनु भयो त ?’जवाफमा भट्टराईले भने, ‘पार्टीको कुनैपनि बैठकमा ओलीले त्यस्तो जिम्मेवारी दिनुभएको छैन ।’
यसै गरि , नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीमा गुटबन्दीको महारोग रहेको बताएका छन्। एमाले काठमाडौं जिल्लाको कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बोल्दै उनले गुटबन्दीको महारोगबाट पार्टीलाई मुक्त गर्नुपर्ने बताए। ‘पार्टीमा पद पाएन भने गुटबन्दी। आशनग्रहण गर्दा अघिपछि भयो भने गुटबन्दी,’ उनले भने, ‘अहिले त मूल्यांकन भएन भन्ने पार्टीमा थेगोजस्तै भएको छ।’
वडाध्यक्षमा त टिकट दिइएन–दिइएन, राष्ट्रिय सभामा किन टिकट पाइनँ भन्दै प्रश्न गर्ने साथीहरूसमेत रहेको उनले बताए। जे कुरामा पनि गुनासो मात्रै गरेर पार्टी नबन्ने उनले बताए। विशेष अवस्थामा बाहेक एक व्यक्तिलाई एक ठाउँमा मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले प्रस्ट पारे। कम्युनिस्ट आदर्शअनुसार जीवनशैली भएन भने त्यो पार्टी सकिने उनले बताए।
कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई जनताले पब्लिक अडिट गर्ने हुँदा त्यहीअनुसार जीवनशैली बनाउन उनले आग्रह गरे। पार्टी विधिसम्मत रूपमा अघि बढ्न सकेन भने दुर्घटना आउने पोखरेलको भनाइ छ। संगठनात्मक अराजकताविरुद्ध वैचारिक संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
एमालेबाट दक्षिणपन्थीहरू अलग भएका हुन् : बादल
नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलले पार्टीबाट दक्षिणपन्थी धारा अलग भएको बताएका छन्। एमाले काठमाडौं जिल्लाको प्रशिक्षणमा बोल्दै बादलले ०७५ असार ३ गतेपछि समाजवादको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कि यथास्थितिमै राख्ने भन्ने संघर्ष पार्टीमा चलेको बताए। यस्तो दुईलाइन संघर्षमा पुँजीवादी धारा देखिएको र पार्टीभित्रको पुँजीवादी धाराले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
सरकारलाई गिराउन त्यो धाराले अदालतको परमादेशको सहारा लिएको उनको आरोप छ। माधव नेपालतर्फ इंगित गर्दै उनले दक्षिणपन्थी धारा अन्तर्घात गर्दै पार्टीबाट अलग भएको बताए। उनले यसलाई राजनीतिक प्रतिगमन र षड्यन्त्रको संज्ञा दिए। राजकीय सत्तामा नेकपा एमालेलाई स्थापना गर्ने दिशामा अघि बढ्न उनले आग्रह गरे।